IZINDLELA EZI-6 ZOKWAKHA AMA-BICEPS AMAKHULU KUMAVIKI AMA-2 NJE - PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Izindlela ezi-6 Zokwakha ama-Biceps amakhulu emavikini ama-2 nje
Ikhaya Ezempilo Ukudla okufanelekile Ukudla Ukufaneleka oi-Abhishek Ngu Abhishek | Kushicilelwe: NgoLwesithathu, ngoJulayi 16, 2014, 7:01 [IST]
Kunoma yimuphi umuntu, ama-biceps akhe lapho empontshwa akhuluma kakhulu ezingeni lokuqina aziqhenya ngalo. Izingalo ezi-scrawny ukucisha okucacile, into wonke umuntu, okungenani abesifazane, angavumelana ngayo. Ubani ongafuni ukwakhiwa, ukuklebhulwa nokumpontshelwa ama-biceps noma kunjalo? Kuzwakala kuyithemba elithakazelisayo impela, ikakhulukazi uma abesifazane abasendaweni eseduze kufanele bakhukhuleke ezinyaweni zabo. Lo mbhalo uphendula imibuzo eyisisekelo kakhulu- 'ukuthi ungakha kanjani ama-biceps amakhulu', 'ukuthi ungathola kanjani ama-biceps ampontshwayo' nokuthi 'ungakhishwa kanjani ama-biceps'.
IZINDLELA ZOKUKHULULEKA AMABHOQO AMADODA NGOKUSHESHA
Ubuwazi ukuthi kungenzeka yini ukwakha ama-biceps amakhulu emasontweni amabili nje kuphela? Kuzwakala kuthakazelisa, akunjalo? Manje-ke, funda kuze kube manje kungenziwa ..
Ukuqeqeshwa Kwesekethe Komzimba Ophezulu
Lokhu kufanele kwenziwe okungenani izinsuku ezimbili evikini uma ufisa ukwakha ama-biceps amakhulu. Ukuqeqeshwa kwesekethe ngokuyisisekelo kubandakanya ukuzivocavoca esifubeni, emuva nasemahlombe. Kuzo zonke izivivinyo ezibandakanya lezi zindawo ezintathu zomzimba ongaphezulu, izingalo zakho ziyasebenza. Uma ufisa ukulahlekelwa nesisindo esithile, enye i-cardio elandelwa ukuqeqeshwa kwesifunda izosiza ukukhulisa imisipha kwezinye izindawo ngaphandle kokuphakamisa izingalo zakho.
Usuku Olunye Ngokuqondile Ngezikhali
Gcina usuku olulodwa evikini lezingalo zakho kuphela. Kubalulekile ukuthi lolu suku lungandulelwa noma luphumelele ukuqeqeshwa kwesifunda. Uma ukuzivocavoca izingalo kukulandelana ngokushesha noma kwandulelwa ukuqeqeshwa kwesifunda, kunamathuba okushisa kwemisipha kanye nokushiswa kwamafutha. Ngakho-ke, ufisa ukuthola ama-biceps ampontshiwe, khumbula leli phuzu elibaluleke kakhulu.
Thola Ukuzivocavoca Okukusebenzela Kakhulu
Umzimba wawo wonke umuntu uphendula ngokuhlukile, ngoba wonke umuntu unokwakheka okuhlukile kwe-fiber emisipheni nobude obuhlukile bemisipha. Khetha izivivinyo ezikusebenzela kangcono. Xhumana nomqeqeshi ukuze wazi okwengeziwe. Ungabi nombono oyiphutha wokuthi ukusebenzisa izingalo kuphela okufaka isandla kuma-biceps amakhulu.
Ukuqeqesha Abasebenza Phambili, Ukuqhubeka Nokunye Ukusebenza
Gxila ezingalweni zakho njalo ngosuku lwesithathu. Ungenza izivivinyo zangaphambili kanye nezinye izivivinyo. Ngaphandle kwalokho, qhubeka nezinye izivivinyo ezisebenza esifubeni, emilenzeni, emuva nasemahlombe ngezinsuku ongenzi ukuqeqeshwa kwesifunda nokuzivocavoca ngezingalo.
ICardio Ukuze Usike Kulawo Makhalori Angadingeki
Kunento eyodwa ebalulekile okufanele uyiqaphele uma ufisa ukuthola ama-biceps ampontshwe- gxila ekutholeni ukuncika uma ungakabi khona. ICardio isiza ukuncika okubukeka kahle kakhulu ngokuzenzakalela kwenza ama-biceps akho abukeke edonsa futhi emakhulu. Ezinsukwini ozinikezela ukuqeqeshwa kwesifunda, gxila futhi ku-cardio. Ukwenza i-cardio izinsuku ezintathu ngesonto kanye ne-abs kungakhulisa imiphumela emihle.
Sebenzisa izisindo ezisinda kancane kancane
Ithiphu ebalulekile yokwakha ama-biceps amakhulu ukuphakamisa izinsimbi ezisindayo, nalokho futhi ngokuqhubekayo. Yenza ukwehluka okuhlukile ukuze ukwandise imiphumela.
singaphuza ubisi olunamathoni ngaphandle kokubilisa
ubuntu ngokusho kosuku lokuzalwa
indlela engcono yokuheha intombazane
zenziwa kanjani izimfanzi ezithosiwe zegolide
Ungasithola kanjani isikhumba esihle ngeviki
izinyathelo zokuhlanza ubuso ekhaya
izinzuzo zezinkanyezi zokugqoka indandatho yesiliva isithupha